के यो सूर्यग्रहणले निम्तयाउँदैछ अर्को महाभारत युद्ध ? - Jhapa Online
विचार • विचित्र विश्व
चुडामणि ग्रहण अर्थात् आइतबार लाग्ने सूर्यग्रहण वा सोमबार लाग्ने चन्द्र ग्रहण, । आइतबार चुडामणि सूर्यग्रहण लाग्दैछ । भनिन्छ, द्वापरयुगमा महाभारत युद्ध हुँदा यो ग्रहण लागेको थियो । सो युद्ध त्यसबखतको विश्व युद्ध नै थियो, जसमा दुवै पक्ष गरी ३९ लाख ३६ हजार ६०० सीपाही मरेका थिए । तर, यो संख्या दुरुस्तै नहुन सक्छ, किनभने महाभारत कथा, इतिहास होइन पुराण हो, साहित्य हो । अझ धैरै अर्थमा दर्शनशास्त्र हो ।
कुनै समयमा भारतमा ठूलो विश्ययुद्ध भएको थियो, त्यसको अघि र पछिका घटना, परिघटना र पात्रहरुलाई तलमाथि गरेर वेदव्यासले महाकाव्य लेखे, त्यो अहिले हामी माझ महाभारत नामले प्रसिद्ध छ । कुनै पनि घटनालाई रोचक र शिक्षाप्रद–ज्ञानप्रद बनाउन परापूर्वकालदेखि घटनाहरुलाई पुराणको रुपमा लेख्ने चलन हाम्रो हिन्दु परम्परा हो ।
महाभारत कथामा उल्लेख हरेक घटना, वार्ता र पात्रले वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अर्थ राख्छ । जस्तो धृतराष्ट्र बुद्धिको प्रतिक थिए, जसबाट १०० पुत्र अर्थात् सय विचार जन्मन्छ । पाँच पाण्डव अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रीय र द्रौपदी अर्थात् शरीर । कृष्ण अर्थात् हाम्रो हृदयको आवाज, हाम्रो मार्गदर्शक । कर्ण अर्थात् अहंकार । महाभारत युद्धलाई पूर्णतयाः हाम्रो विचारसँगको युद्धसँग सामाञ्जस्यता मिलाइएको छ ।
पुराण र ज्योतिषशास्त्रमा धेरैलाई विश्वास नहुन सक्छ । हामी ठोस प्रमाण खोज्छौ, तर यी दुई संकेतको भाषा बोल्छन् । यी विज्ञान हुन्, र गणितको भाषा बोल्छन् । हामी तेर्सिएको औंला हेर्छौ, विशाल सूर्य देख्न सक्तैनौं । ग्रहण लाग्छ, हामी मधुरो घामबाहेक केही देख्दैनौ, कहाँ छ विकिरण ? कहाँ छ नकारात्मक ऊर्जा ? हामी प्रश्न गर्छौ । हाम्रो लागि जे देखिन्छ, त्यो मात्र सत्य हो । हामी सत्य खोज्दैनौ, हामी आराम खोज्छौं । रोग लाग्छ, अनि उपचार खोज्छौं पीडा पर्छ अनि कारण खोज्छौं ।
बज्यैले एकादशीमा चामलको भात खान हुँदैन भन्नुहुन्छ, हामी ‘पाखण्डी’ भन्छौं, तर पेटमा एपेन्डिसाइटिस किन हुन्छ, हामीसँग यसको उत्तर हुँदैन । मंगलबार नयाँ सामान किन्नु हुँदैन भन्नु हुन्छ, हामी नयाँ जुत्ता किनेर ल्याउँछौं, जुत्ता २ दिनमै फाट्छ, हामी दोष पसलेलाई दिन्छौं । आधुनिक विज्ञानले धेरै रोगको कारण बताउन सक्दैन, तर यसको रोकथाम त पहिल्येदेखि हामीसँग छ, हाम्रा शास्त्रहरुमा ।
सूर्य ग्रहणको दिन हाम्रो शरीर र आत्मामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यसबाट नबचे आगामी दिनहरुमा यसको असर देखिन्छ– शरीरमा, विवेकमा, आत्मामा । यो पालीको सूर्यग्रहणले झन् राज्यको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने यसले दुई देश बीच तनाव वा युद्धको स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।
पश्चिममा नेपाल र भारत बीचको तनाव, गलवानमा भारत र चीन बीचको घम्साघम्सी यो खगोलिय पिण्डहरुको प्रभाव हो । ग्रहणको दिन यसले उग्ररूप लिन सक्छ । गलवान उपत्यकामा भारत र चीन दुवैले ठूलो मात्रामा सेना, हातहतियार र युद्धपोतहरु तयारी अवस्थामा राखेका छन् । एउटा सानो चिंगारी निस्कियो भने ठूलो विध्वंश हुनसक्छ । अर्को महाभारत वा तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्छ ।
ज्योतिषशास्त्र अर्थात् ‘ज्योति जगाउने’ शास्त्र । यसको उत्पत्ति भएको थियो मान्छेलाई मोक्ष (ज्ञान) को बाटो देखाउन । तर, अहिलेका ज्योतिषीलाई कुण्डली देखाएर सोध्यो भने मोक्षको बारेमा बोल्नै सक्तैनन् । जीवनका साधारण घटनाहरु विवाह, अर्थ, पुत्र, आयुका बारेमा मात्र गणना गर्छन् । अहिलेको महामारी र सम्भावित विश्वयुद्ध टाल्नसक्ने उपाय बताउने कुरै भएन ।
ज्योतिषशास्त्रको पनि अपवाद छ । पाँच पाण्डवमध्ये कान्छा सहदेवमा ज्योतिषको ज्ञान थियो, उनले युद्ध हुनु अघि ग्रहगोचर अध्ययन गरेका थिए, जसअनुसार पाण्डवको हार हुने निश्चित थियो । तर, भयो उल्टो, भयो पाण्डवको जीत । किनभने पाण्डवतर्फ स्वयम् भगवान् कृष्ण हुनुहुन्थ्यो । ज्योतिषको भविष्यवाणी पनि दैविक शक्ति, आध्यात्मिक शक्तिले परिवर्तन गर्न सक्छ । मानिसको भाग्यमा लेखिएको हुन्छ एउटा कुरा तर ऊ ध्यान र भक्तिको मार्गमा हिँड्यो भने उसको भाग्य पनि परिवर्तन हुनसक्छ । एउटा मानिसले एक जनाको भाग्य परिवर्तन गर्नसक्छ, एउटा हुलले समाज, राष्ट्र र विश्वकै लेखा परिवर्तन गर्न सक्छ ।